OEM ọrụ - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Iji hụ na ngwaahịa ROC OEM osisi panel ngwaahịa nwere ike ijide ụdị ejiji ma na-aga n'ihu ndị asọmpi ndị ọzọ. Anyị guzobere R & D Center na gburugburu 12 engineer chepụta ma zụlite ogwe osisi ahụ, dị njikere inye ndị ahịa anyị ọrụ ka mma ma kwalite asọmpi anyị. Anyị kpebisiri ike inyere ndị ahịa anyị aka imeziwanye ihe oyiyi ụlọ ọrụ ha, bulie uru ahịa, ma belata mmepe LT, na-ebelata ọnụahịa mmepụta Anyị nwere ike ịnye otu nkwụsị ọrụ OEM / ODM. N'ime afọ 5 gara aga, nnukwu ndị otu ahụ enweela nnukwu ọganiihu. Ọtụtụ ndị ahịa nabatara ma nyere ha aka ijide òkè ahịa karịa.
Anyị nwere nke anyị na plywood factory / OSB factory / MDF factory na LVL ngwaahịa factory, Tooling Factory izute ahịa chọrọ OEM mmepụta. Nmeputa kwa ọnwa rue 70000CBM (PLYWOOD, OSB na MDF wdg).
Anyị nwere usoro nlekọta njikwa dị n'ime ya na nyocha akụrụngwa na-abata, nyocha nyocha na ntinye mbupu. Nke a bụ iji hụ na ngwaahịa anyị nwere ike izute ụdị ahịa ndị ahịa chọrọ yana ngwaahịa OEM gị nwere ntụkwasị obi na mma. Anyị factory gafere ISO9001 na anyị na ngwaahịa nwetara OA, FSC, JAS-ANZ, PEFC, BS wdg asambodo. Anyị kwenyere naanị site na ịdị mma dị mma mgbe ahụ nwere ike imeri ntụkwasị obi n'aka ndị ahịa anyị.
Na afọ nke mbupụ ahụmahụ, anyị nwere ike ijikwa omenala nkwupụta usoro were were na-adọ hazie obodo njem iji hụ na oge nnyefe nke ndị ahịa anyị Mbupu. Anyị niile kwenyere na ọrụ kacha mma bụ ihe kachasị ebubata iji merie ntụkwasị obi ndị ahịa anyị n'oge a.
Bido ahia ohuru gi na plywood di nma, OSB na MDF. Ka anyị mee ngwaahịa OEM / ODM gị ma kwalite azụmahịa gị. Biko kpọtụrụ ROCPLEX ugbu a.
Usoro OEM / ODM
Gịnị bụ usoro nke ROCPLEX osisi panel OEM / ODM?
Nhazi R & D
1. Nyocha nyocha
Dị ka nzọụkwụ mbụ nke mmepe, ndị na-emepụta anyị dị njikere itinye aka na nyocha achọrọ. Maka ụfọdụ ndị ahịa nwere echiche na-adịghị ahụkebe, dị ka ogwe osisi ejiri na ụlọ ahịa ma ọ bụ jiri ya rụọ ọrụ, anyị ga-ahazi ndị otu injinia anyị, otu ndị na-ere ahịa ka ha wee nye ndụmọdụ ọkachamara ha iji hụ na ngwaahịa ahụ na-eche atụmanya ahịa.
A nzọụkwụ, anyị na-eme a ndepụta nke chọrọ agwa nke a gị osisi panel.
2. Nka na ụzụ Review
Site na ndepụta nke njirimara chọrọ, ndị na-emepụta anyị, yana ngalaba ịzụta, na-agwa ndị na-eweta ihe anyị, iji mee mpempe akwụkwọ nhazi nke akụrụngwa.
N'oge a, anyị nwere ike ịlaghachi na nke mbụ n'ihi ụfọdụ enwere ike ma ọ bụ nsogbu ọnụ ahịa.
3. Ọnụ na nhazi oge
Dabere na nyocha gara aga, ROCPLEX nwere ike inye ụdị ụgwọ na usoro oge, nke dịgasị iche na mkpụrụedemede achọrọ, ọnụọgụ na ikike ịkekọrịta.
N'oge a, anyị nwere ike ịbanye na nkwekọrịta nkwekọrịta.
4. Development nke Sample
ROCPLEX ga - eme ihe nlere, nke akpọrọ injinịa sample, nke na - ahazi mkpụrụedemede niile emere. Nlereanya a ga - emezi ule nnwale, ule kwụsiri ike, ule ike na ule siri ike.
Anyị na-agba ndị ahịa ume itinye aka na mmepe ahụ iji nye nzaghachi ozugbo.
Na a afọ ojuju engineering sample, anyị nwere ike ịga n'ihu na-ikpe-amị ogbo. anyị na-enyocha ihe ize ndụ nwere ike ịdị na-agbanwe nke oke mmepụta, ntụkwasị obi nke ndị na-ebubata ya na usoro mmepụta ihe.
6. Nnukwu Mmepụta
Mgbe edozi nsogbu niile ma chọpụta ihe egwu, anyị banyere n'ọgwụgwụ ikpeazụ nke oke mmepụta.